Baarlamanka Soomaaliya oo ansixiyey hindise sharciyeedka Kaluumeysiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
25th October 2014 A warsame Featured 0
Mareeg.com: Xildhibaanada Barlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ayaa ansixiyey Hindise-sharciyeedka Kalluumeysiga dalka, iyagoo dhanka kale soo gabagabeeyey Akhrinta Hindisaha Hanti dhowrka guud ee Qaranka.
Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa waxa ay cod u qaadeen Hindise sharciyeedka Kalluumeysiga dalka, waxaana mudanayasha ay meel mariyeen hindise sharciyeedkaasi, iyadoo ay ogolaatay 135.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikar oo shir guddoominayay kulanka ayaa Jeylaani Nuur Iikar ayaa sheegay in sharciga loo qaaday cod gacan-taag ah, waxaana ansixiyay 140 mudane, waxaa diiday 2 mudane, waxaana ka aamusay labo mudane oo kale.
“Waxaa goob joog ah 140 xildhibaan, ogol waa 135, 2 waa ay diideen, 3 waa ay ka aamuseen, sidaa darteed hindise sharciyeedkan waa ansax” ayuu yiri Jeylaani Nuur Iikar.
Guddoomiyaha guddiga Kheyraadka ee baarlamaanka Xildhibaan Saciid Maxamed Cali ayaa Warbaahinta Qaranka uga waramay marxaladihii uu soo maray, isagoo mudanayaasha baarlamaanka ka mahadceliyay sida ay u ansixiyeen, uuna rajeynayo in sharcigaasi uu wax badan ku soo kordhiyo dalka, maadaama uu ka hortago dadka sida sharci darrada ah uga kalluumeysanaya kheyraadka badda.
“Waa sharci dalka daqli soo gelinaya, waa sharci shaqo abuuraya, waa sharci ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah, waana uu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa” ayuu yiri Xildhibaan Saciid.
Baarlamaanka ayaa sii amba qaaday dhamestirka akhrinta koowaad ee hindise sharciyeedka Hanti dhawrka guud ee dalka, iyadoo mudanayaasha ay su’aallo arrimahaasi ka waydiiyeen Dr Nuur Jimcaale Faarax oo ah hanti dhowrka guud ee Qaranka, isagoo uga jawaabay su’aallihii la waydiiyay Xildhibaannada.
“Waxaan codsanayaa in sharcigan la meel mariyo, si aan u tiri koobano hantida naga taalla duunida dacaladeeda, aniga waxaan ku dadaalayaan intii karaankeyga in aan sharcigan wax ku maamulno” ayuu yiri Dr Nuur.
Dhawaan ayaa waxaa baarlamaanka Soomaaliya loo gudbiyey ilaa 10 Hindise Sharciyeed, kuwaasoo kii ugu horreyey ay manta meel mariyeen, halka kuwa kale oo badana ay weli horyaallaan.